Sawirro: Kulane Jiis iyo xildhibaano kale oo lagu doortay Dhuusamareeb | Arrimaha Bulshada
Home News Sawirro: Kulane Jiis iyo xildhibaano kale oo lagu doortay Dhuusamareeb
Sawirro: Kulane Jiis iyo xildhibaano kale oo lagu doortay Dhuusamareeb
Bulsha:- Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya, kuwaas oo deegaan doorashooda ay tahay dowlad goboleedka Galmudug.
Kuraasta doorashadooda la qabtay ayaa waxaa ka mid ah kursiga HOP#040, waxaana ku guuleystay, Cabdullaahi Aadan oo loo yaqaano Kulane Jiis, kadib markii uu u tanaasulay msuharrax Xasan Cabdi Jaamac oo u ahaa malxiis, maadaama isaga loo xiray kursiga.
Kulane Jiis oo loo qaaday cod gacan taag ah ayaa helay 101 cod, sida uu shaaciyey guddiga SEIT ee dowlad goboleedka Galmudug.
Guusha Cabdullaahi Kulane oo ku xiran Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa guul weyn u ah kooxda Villa Soomaaliya oo dadaaal xoogan gelisay kursigan oo markii horeba ahaa qoondo haween, balse hadda loo beddalay, rag, si loogu soo saaro Kulane Jiis oo kusoo baxay.
Sidoo kale kursiga HOP#007 waxaa kusoo baxay Farah Cabdi Diini oo ah guddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir.
Diini ayaa kusoo baxay codad dhan 76 cod, kadib markii uu u tanaasulay musharax Mohamed Cabdi Cali oo kula tartami lahaa kursigaaso.
Doorashada labadaan kursi waxaa kasii horreeyey kursi HOP#138, waxaana loo doortay siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur, kana mid ah mucaaradka.
Si kastaba, tallaabada ay Galmudug qaaday ee ku aadan doorashada Golaha Shacabka ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho.